कोरोना खोपको आशा : नौवटा खोप परीक्षणको तेस्रो चरणमा – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
| प्रकासित मिति : १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:१७
कोरोना भाइरसका निम्ति खोप विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लागिरहेको छ । प्रभावकारी निष्कर्ष अझै आउन सकेको छैन । नौवटा खोप परीक्षणको तेस्रो चरणमा पुगेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन
(डब्लूएचओ) ले जनाएको छ । हाल विश्वभर १५५ भन्दा बढी खोप विकासको परीक्षण चलिरहेको छ । अनुसन्धान भइरहेका ती खोपले मानव समुदायलाई आशा भने जगाएको छ । डब्लूएचओका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरण पार गरिसकेका र पार गर्दै गरेका दसवटा खोप निष्कर्षमा पुग्ने उच्च सम्भावना छ ।
चीनको ‘एडेर्नो भाइरस टाइप ५ भेक्टर’ र अमेरिकाको ‘एमआरएनए’ भ्याक्सिनको सबैभन्दा बढी प्रभावकारी परीक्षण देखिएको छ ।यी बाहेक अन्य तीनवटा चीनले ‘इनएक्टिभेटेड’ तर्फको खोप अध्ययन कार्य दोस्रो चरणमा पु¥याएको छ । त्यस अन्तर्गतको एउटा खोप भने पहिलो चरणमा छ । त्यसपछि भारत र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको सहकार्यमा ‘नन रिप्लेसिङ भाइरल भेक्टर७चकत्रगयसका रूपमा एक खोप तयार भइरहेको छ ।
जर्मन युनिभर्सिटी अफ मारबर्गको भिरोलजी संस्थानले पनि मानवमा परीक्षणको तयारी गरिरहेको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले गत फेबु्रअरीमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माण थालेका थिए र परीक्षण जारी छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
आज सोमबार सौवालको पहिलो दिन: घरघरमै नमाज पाठ गरी इदुल फित्र मनाइँदै
नक्कली जग्गाधनी खडागरी ३२ बिगाह जग्गा हिनामिना गर्ने सहसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:१७
अवैध मिर्गौला प्रत्यारोपणस् चिकित्सक, प्रहरी, वडाध्यक्ष लगायतको संलग्नता १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:१७
स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:१७
युवा अभियान्ता सरोजको नेतृत्वमा ६० दिने अभियान: सहिद स्मृती बहुमुखी क्याम्पस परिसरमा सरसफाइ तथा बृक्षारोपण १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:१७
गृहजिल्ला चितवनबाट प्रचण्डले भने : हामीले मिलेर नयाँ नक्सा बनाएको हो, कोही दलाल‍ र कोही महान् राष्ट्रवादी होइन! १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:१७
मृगौला किनबेचको अबैध धन्दामा लाखौं रुपैयाँको चलखेल : प्रहरीले गर्यो डाक्टर र जनप्रतिनिधिसहित १२ जनाको नाम सार्वजनिक ! १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:१७
गृह जिल्लामा ब्यस्त प्रचण्ड आज दिनभर पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा । १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:१७
मृगौला प्रत्यारोपणमा कुनैअवैधानिक र गैरकानुनी काम नगरेको कलेज अफ मेडिकल साईन्सेजको दाबी । १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:१७
पत्रकार अधिकारीले दिए बिहेको भोज गर्ने रकम कोराना कोषमा १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:१७
डेरावालले भाडा नदिँदा कोठाभाडाबाट जीविका चलाउँनेलाई जीविका चलाउन समस्या ! १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:१७
बाढीपहिरोबाट मर्नेको सख्ँया ८८, ३२ बेपत्ता १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:१७
श्रावण र भाद्र दुई महिना बाढी पहिरोको समस्या’ १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०४:१७